CXD oo si buuxda ula wreegay Guriceel | KEYDMEDIA ONLINE
Xaalada Guriceel ayaa saaka deggan, kadib markii xalay ciidamada Ahlu Sunna ay ka baxeen degmada, oo maalmihii ugu danbeeyey uu ka socday dagaal qaraar.
GURICEEL, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, ayaa sheegaya in xaly xilli danbe ay ciidamada Ahlu-sunna isaga baxeen magaalada, kadib wada-hadal, gabbal-dhicii shalay soo billowday oo uu garwadeyn ka ahaa Ganacsade Xaashi Carabeey oo ay xigto dhow yihiin Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan.
Sida ay xoguhu sheegayaan, hoggaanka Ahlu-sunna, maalin ka hor ayay dalbadeen in waddo loo furo, si ay uga baxaan magaalada, hayeeshee, xilligaas waxaa la isku fahmi waayay, wareejinta labo gaari oo ASWJ, ay ku qabsatay dagaalkii degaanka Bohol ka dhamaadki bishii hore.
Hayeeshee, hoggaanka ASWJ, ayaa ugu danbeyn xalay oggolaaday in ay wareejiyaan labada gaari, oo mid ka mid ah uu yahay gawaarida gaashaaman ee dowladda Turkigu ugu deeqday ciidnaka Gorgor.
Wada-hadallada ay ganacsatadu garwadeynta ka yihiin, ee galinkii danbe ee shalay billowday, ayaa abuuray isku soo dhawaansho, waxaana lagu heshiiyay in la sameeyo guddi labada dhinac ah si loo sii wado in dhamaan tabashooyinkii dagaalka dhaliyey xal laga gaaro.
Dagaalka Guriceel oo socday afartii maalin ee la soo dhaafay, ayaa sababay khasaare xooggan, waxaana ku naf-waayay in ka badan 30 qof oo dhinacyada dagaallamay u badan, halka dhaawucu intaas ka badan yahay.
Kooxda hubeysan ee Ahlu-sunna, waxaa hoggaamiya Macallin Maxamuud oo fadhigiisu yahay Garowe, iyo Sheekh Shaakir oo ku sugan Guriceel, waana labo wadaad oo ka soo jeeda gobolka.
Dowladda Federaalka, ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay dagaalka Guriceel, Fahad iyo Farmaajo, ayaana lagu eedeeyay in ay ciidamadii ugu badnaa u daabuleen Guriceel, si loo gubo magaalada iyo wixii ku dhex jira.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa qudhiisa u muuqda inuu si weyn u garab taagan yahay Madaxweynaha Galmudug, oo si cad u sheegay in degaannada Galmudug aan laga aqbali karin awood ciidan oo la loollanta midda Dowladda.